Isi ihe 3 mgbe ịmalite ụlọ ahịa na ntanetị | ECommerce ozi ọma
Isi okwu 3 mgbe ịmalite ụlọ ahịa n'ịntanetị
Ozugbo i mere mkpebi ịmalite azụmahịa nke gị, usoro nke ịmalite ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọ na-adịkarị ntakịrị mgbagwoju anya ma na-akarị akarị. Enwere ọtụtụ mkpebi ịme, yabụ ịchebe ebe na-ezighi ezi nwere ike igbu oge na mgbalị. Ya mere, ọ bụ adaba ịmata akụkụ dị mkpa mgbe ị na-amalite ụlọ ahịa n'ịntanetị.
1 1. Họrọ ụgbọ ala ịzụ ahịa dị mfe iji
2 2. Mwepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ozugbo enwere ike
3 3. Mee onwe gị ihe niile ị nwere ike
1. Họrọ ụgbọ ala ịzụ ahịa dị mfe iji
Họrọ a ụgbọ ibu azụmahịa nke dị mfe iji, na-enye gị ohere ilekwasị anya n'akụkụ ndị ọzọ dị mkpa nke ecommerce, gụnyere ịmepụta ọdịnaya bara uru, mmekọrịta na ndị ahịa, ịre ahịa azụmaahịa, wdg. Dị ka o kwesịrị, họrọ maka ndenye aha na ndenye aha akwadoro nke ọma, ebe ọrụ ndị a na-elekọta Bochum niile, ntinye ego, na nkọwapụta teknụzụ.
2. Mwepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ozugbo enwere ike
Ẹkedori a ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ngwa ngwa bụ otu n'ime ihe kachasị mma enwere ike ime ya site na azụmaahịa Ecommerce. Etinye ego na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị zuru oke iji gboo mkpa ndị ahịa, chọrọ na nsogbu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igbu oge. Kama nke ahụ, ọ ka mma ị nweta ụlọ ahịa na ngwa ngwa ka o kwere mee ka gị na ndị ahịa wee nwee mmekọrịta ma mụta ihe n'aka ha. Ozugbo ị nwere echiche ziri ezi banyere ndị ahịa gị, ị nwere ike melite saịtị gị dabere na nghọta ọhụrụ ndị a.
3. Mee onwe gị ihe niile ị nwere ike
Mgbe ị bido azụmaahịa Ecommerce izizi gị, nkwanye bụ ime ihe dị ka o kwere mee n'onwe gị. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị ghọtaghị otu azụmahịa gị si arụ ọrụ site na isi, ị gaghị enwe ike ịzụ ndị otu gị nke ọma n'ọdịnihu. Tụkwasị na nke a, ịdabere na ndị mmemme, ndị na-emepụta weebụ, webmasters, wdg, oge ọ bụla ọ dị mkpa ka a gbanwee ihe, na njedebe ọ na-adị oke ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Isi okwu 3 mgbe ịmalite ụlọ ahịa n'ịntanetị
Jose Ricardo dijo
Ezi ụtụtụ, hna ajụjụ gịnị ka ị pụtara site na ịhọrọ ụgbọ ahụ n'ụzọ ziri ezi? Ọ bụ ngwa mgbakwunye? Ma ọ bụ ọ na-abịa na ndabara na a isiokwu?
Zaghachi José Ricardo
Alarcon Fredy Pillaca dijo
Ndewo Susana, daalụ maka ndụmọdụ gị bara uru, m ga-achọ ịma ma anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị ozugbo. Ekele si Peru.
Zaghachi Fredy Pillaca Alarcon
Atụmatụ 3 iji wuo saịtị ecommerce ka mma
Netwọk mmekọrịta na ọnụ ọgụgụ na-ekpughe uto ha